Netflix ၌ ပွသနသေညျ့ အခဈြဇာတျကားကောငျးမြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/Netflix ၌ ပွသနသေညျ့ အခဈြဇာတျကားကောငျးမြား။
Netflix ၌ ပွသနသေညျ့ အခဈြဇာတျကားကောငျးမြား။
So Shwe June 8, 2020	Entertainment Leaveacomment
၁။ Always Be My Maybe
Ali Wong နဲ့ Randall Park တို့ရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဇာတျလမျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ တဈခြိနျက သူငယျခငျြးဟောငျးမြားဖွဈကွပွီး ကားနောကျခနျးအတှငျး၌ လူပြို၊ အပြိုဘဝကို အပွနျအလှနျဆုံးရှုံးခဲ့ကွပွီး နှဈအတျောကွာ ပွနျလညျတှဆေုံ့တဲ့အခါမှာတော့ ဘယျလိုတှဖွေဈကွမလဲဆိုတာကို ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှု ခံစားပေးကွပါဦး . . .
၂။ A Cinderella Story
ကလေးငယျတိုငျးရဲ့ အကွိုကျဆုံးဖွဈခဲ့သညျ့ Cinderella ကာတှနျးကို ကြောရိုးပွုရိုကျကူးထားသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၃။ Someone Great
ကနဦးမှာ အပွတျအစဲဇာတျလမျးဖွငျ့ စတငျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျး၌ Gina Rodriguez ရဲ့ အခဈြအပျေါ ရူးသှပျမှုက ပရိသတျတှရေဲ့ နှလုံးသားကို အကောငျးဆုံးလှုပျကိုငျနိုငျမယျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၄။ P.S. I Love You
ဒီဇာတျကားကတော့ အလှမျးအဆှေးနဲ့ ရိုမနျတဈကို ပေါငျးစပျထားခွငျးကွောငျ့ ပရိသတျမြားအတှကျ တဈရှူးဆောငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၅။ About Time
Rachel McAdams ရဲ့ ထူးခြှနျသညျ့သရုပျဆောငျမှုမြားဖွငျ့ အခြိနျခရီးသှားခွငျး၊ ရိုမနျတဈစသညျဖွငျ့ မတူညီသညျ့ ရသမြားပေးစှမျးနိုငျသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၆။ One Day
ဗွိတိနျကောလိပျမှ ကြောငျးသားမြားရဲ့ ခဈြဇာတျလမျးအပျေါ အခွခေံရိုကျကူးထားခွငျးဖွဈပွီး ကံကွမ်မာအလှညျ့အပွောငျး၊ အသညျးကှဲခနျးနဲ့ အခဈြဇာတျလမျး အားလုံးပေါငျးစပျထားသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၇။ To All the Boys I’ve Loved
ရှုပျပှတေတျသညျ့ အမြိုးသမီးငယျတဈယောကျရဲ့ ဇာတျကွောငျးကို အခွခေံရိုကျကူးထားသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၈။ Set It Up
Netflix ဇာတျကားမြား၌ သာမနျမွငျတှနေ့ကေမြဟုတျသညျ့ ရိုမနျတဈဇာတျကားအမြိးအစားဟု ပွောနိုငျသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
၉။ Ali’s Wedding
အဆိုပါဇာတျကားသညျ ဖွဈရပျမှနျကို ရိုကျကူးထားသညျ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး မိသားစုအပျေါသစ်စာရှိရငျး နှလုံးသားရဲ့ စခေိုငျးရာအတိုငျး လိုကျပါခဲ့သညျ့ ဇာတျလမျးကို ပုံဖျောထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
၁၀။ The Kissing Booth
ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၈) ခုနှဈ၌ လူပွနျအကွညျ့မြားဆုံး ဇာတျကားဖွဈပွီး မိနဈပေါငျး (၁၁၀) မိနဈကွာမွငျ့သညျ့ အဆိုပါဇာတျကား၌ Joey King နဲ့ Jacob Elordi တို့ရဲ့ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျမှုမြားကို မွငျတှရေ့သညျ့ ဇာတျကားလညျးဖွဈပါတယျ။
၁၁။ She’s Gotta Have It
အမရေိကနျဒါရိုကျတာ Spike Lee ရဲ့ ပထမဆုံးဇာတျကားဖွဈပွီး အလိုမတူဘဲ လိငျဆကျဆံရနျ ကွိုးစားသညျ့ အမြိုးသား (၃) ဦးကို ရိုကျနှကျခဲ့သညျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးရဲ့ ဇာတျလမျးလညျးဖွဈပါတယျ။ Spike Lee သညျ Netflix စီးရီးမြားကို နှဈရာသီဆကျတိုကျ ဖနျတီးခဲ့ပွီး DeWanda Wise က ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
၁၂။ The Spectacular Now
(၂၀၀၈) ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့သညျ့ Tim Tharp ရဲ့ The Spectacular Now စာအုပျကို ကွိုကျနှဈသကျသူမြားအတှကျ ကွညျ့ရှုခံစားခငျြစရာ ဇာတျလမျးကောငျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
၁၃။ A Christmas Prince
အားလပျရကျမြား၌ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျမယျ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ လူငယျဂြာနယျလဈတဈယောကျရဲ့ နှေးထှေးတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူ ခနျ့ညားတဲ့မငျးသားတို့လညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။
၁၄။ Love and Honor
ဗီယကျနမျစဈပှဲ၌ ပါဝငျတိုကျခိုကျနရေသညျ့ စဈသားတဈယောကျက အိမျကို တိတျတဆိတျပွနျလာပွီး ခဈြသူမိနျးကလေးနဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့ခဲ့ရာမှ ဖွဈပကျြခဲ့သညျမြားကို ရိုကျကူးထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Netflix ၌ ပြသနေသည့် အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းများ။
Ali Wong နဲ့ Randall Park တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က သူငယ်ချင်းဟောင်းများဖြစ်ကြပြီး ကားနောက်ခန်းအတွင်း၌ လူပျို၊ အပျိုဘဝကို အပြန်အလှန်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီး နှစ်အတော်ကြာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှု ခံစားပေးကြပါဦး . . .
ကလေးငယ်တိုင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့် Cinderella ကာတွန်းကို ကျောရိုးပြုရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦးမှာ အပြတ်အစဲဇာတ်လမ်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း၌ Gina Rodriguez ရဲ့ အချစ်အပေါ် ရူးသွပ်မှုက ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို အကောင်းဆုံးလှုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အလွမ်းအဆွေးနဲ့ ရိုမန်တစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် ပရိသတ်များအတွက် တစ်ရှူးဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Rachel McAdams ရဲ့ ထူးချွန်သည့်သရုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် အချိန်ခရီးသွားခြင်း၊ ရိုမန်တစ်စသည်ဖြင့် မတူညီသည့် ရသများပေးစွမ်းနိုင်သည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်ကောလိပ်မှ ကျောင်းသားများရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ် အခြေခံရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်း၊ အသည်းကွဲခန်းနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း အားလုံးပေါင်းစပ်ထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ရှုပ်ပွေတတ်သည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Netflix ဇာတ်ကားများ၌ သာမန်မြင်တွေ့နေကျမဟုတ်သည့် ရိုမန်တစ်ဇာတ်ကားအမျိးအစားဟု ပြောနိုင်သည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဇာတ်ကားသည် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မိသားစုအပေါ်သစ္စာရှိရင်း နှလုံးသားရဲ့ စေခိုင်းရာအတိုင်း လိုက်ပါခဲ့သည့် ဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၈) ခုနှစ်၌ လူပြန်အကြည့်များဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မိနစ်ပေါင်း (၁၁၀) မိနစ်ကြာမြင့်သည့် အဆိုပါဇာတ်ကား၌ Joey King နဲ့ Jacob Elordi တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မှုများကို မြင်တွေ့ရသည့် ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒါရိုက်တာ Spike Lee ရဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အလိုမတူဘဲ လိင်ဆက်ဆံရန် ကြိုးစားသည့် အမျိုးသား (၃) ဦးကို ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Spike Lee သည် Netflix စီးရီးများကို နှစ်ရာသီဆက်တိုက် ဖန်တီးခဲ့ပြီး DeWanda Wise က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၈) ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့သည့် Tim Tharp ရဲ့ The Spectacular Now စာအုပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ကြည့်ရှုခံစားချင်စရာ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ရက်များ၌ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူ ခန့်ညားတဲ့မင်းသားတို့လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေရသည့် စစ်သားတစ်ယောက်က အိမ်ကို တိတ်တဆိတ်ပြန်လာပြီး ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Source ~ Cosmipolitan
Previous ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကှငျးလယျကစားသမား (၁၀) ဦး။
Next အမရေိကနျပွညျထောငျစုသမ်မတ Donald Trump ကို ဝဖေနျပုတျခတျလိုကျတဲ့ Snapchat